Hlaing Tharyar Strike – ၀ါဏိဇ္ဖခုံရုံးတက်ရန် အယူအဆ ကွဲလွဲမှုများရှိနေ | MoeMaKa Burmese News & Media
by Yangon Press International ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ (YPI)
အလုပ်သမ တဦးရဲ့ လစာဖြတ်ပိုင်း၊
တလမှာ အလုပ်ချိန် နာရီ ၂၇၀ လုပ်တယ်ဆိုတော့ တရက်ကို ၁၀ နာရီ တပတ် ၁ ရက်နား ပြီး လုပ်ရတဲ့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ရတဲ့ အတွက် လက်ဝယ်ရတဲ့ငွေက ၅ သောင်း ၄ ထောင်ပါ။
Original Post from YPI Facebook found here.
2 Responses to Hlaing Tharyar Strike – ၀ါဏိဇ္ဖခုံရုံးတက်ရန် အယူအဆ ကွဲလွဲမှုများရှိနေ
ံHopeHope on February 21, 2012 at 5:10 pm
မတရားလောဘတက်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ စီးပွါးရှာနေတဲ့ တရုတ်တွေကို ဘာဖြစ်လို့ များ အာဏာပိုင်တွေကို ဒီလောက်တောင် အကြောက်ကြီးကြောက်နေတာလဲ။ အလုပ်သမားတွေ လစာကိုလည်း မတရားခေါင်းပုံဖြတ်နေတာ။ အဲဒါ တော်တော်အရုပ်ဆိုး အကြည်းတန်နေတာ။ တခုခုတော့ ရှိရမယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့လစာငွေတွေကို အာဏာပိုင်တွေနဲ့တရုတ်သူငှေးနဲ့ ပေါင်းပြီး မတရားယူနေ သလားမသိဘူး။ အဲဒီရက်ကွက်မှာ အရမ်းဆိုးတဲ့ လူမိုက်တွေဘာလုပ်နေကြသလဲ။ အဲဒီက ပိုင်ရှင်တယောက်လောက်ကို အသေသတ်ပြလိုက်၊ အာဏာပိုင်တွေထဲက တယောက်ကို မသေသေအောင် လုပ်ပြလိုက်စမ်းပါ။
Mon on February 21, 2012 at 6:48 pm
It’s too much to work 10 hoursaday as international labor law allows only 8 hours, if more than that, the rest must go to overtime withareasonalbe rate.
”PLEASE BE UNITED all involved in this strike to achieve what you deserve!!!”